Archive du 20170225
Fosafosa facebook Nisintona ny fitoriany i Jaona Elite
Taorian�ny dinika nifanaovan�ny fianakavian�i Hiary Rapanoelina sy ny solombavambahoaka Harijaona Randriarimalala na Jaona Elite afak�omaly, dia nisy ny valandresaka nataon�ny roa tonta, niampy ny eo anivon�ny sendikan�ny artista omaly.
Randriamahefa Charles "Avelao ho kandida ny rehetra"
Maro ny nilaza fa ny lal�m-pifidianana nisy ary mbola mitoetra eto amintsika izay nilaza ny tokony ho nipetrahan�ireo mpilatsaka hofidiana farafahakeliny 6 tsy an-kianto teto Madagasikara no nahatonga ireny hoe Ni �
Fiatrehana ny fifidianana Miara-miasa ny CENI sy ny AAENA
Tontosa omaly ny atrikasa ho fiaraha-miasan�ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) sy ny Fikambanan�ny maintimolalin�ny sekolim-pirenena manofana ho mpitantan-draharaham-panjakana any Frantsa (AAENA).
Fanovana governemanta Hanadio tena sy hanao propagandy ny HVM
Tsy mbola mety tanteraka ny fanovana governemanta hatramin�izao na efa ny fiandohan�ny volana janoary aza no nivoahan�ny resaka amin�ny hanovana azy.
Fisoratana anarana ao anaty lisi-pifidianana Hampandraisana anjara adidy ny vehivavy sy ny tanora
Nikarakara �atrikasa ho fanentanana ireo vehivavy sy tanora mikasika ny anjara adidiny amin�ny maha olom-pirenena azy ireo amin�ny fisoratana anarana ao anaty lisi-pifidianana�.
Marc Ravalomanana Hihaona amin�ny vahoakan�Alaotra
Andrasana ao Ambatondrazaka ny filoha teo aloha sady filoha nasionalin�ny antoko Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana anio sabotsy 25 febroary 2017.
Nifoka miafina ?
Fa inona mihitsy no fiheveranao anay ry Jean ? Mba niezaka ny nangina sy tsy hamaly ihany aho tamin�ny teninao saingy tsy nety ny feon�ny fieritreretana.
Boaderozy tany Cap Masoala Afa-maina ireo atidoha ?
Tapitra hatreo ! Tsy misy tohiny intsony fa nangina ny raharaha momba ilay sambo �Lumina� nahatrarana andramena miisa 341.
Mari-karaman�ny mpiasam-panjakana Efa tena lany andro
Nametraka fitoriana teny amin�ny filankevi-panjakana momba ny mari-karaman�ny mpiasam-panjakana amin�izao fotoana izao i Tabera Randriamanantsoa, minisitry ny asam-panjakana tamin�ny andron�ny tetezamita.
Faritra Alaotra Mangoro Hanolo-tanana ny kaominina amin'ny fampandrosoana
Hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ireo kaominina 87 mandrafitra ny faritra Alaotra Mangoro ny fiadidiana ny Faritra. Manodidina ny efatra hetsy sy roa tapitrisa Ariary isaky ny kaominina ny vola homen'ny Faritra azy ireo.
Fikambanana � Terres en m�l�es � Nahazo 20 tapitrisa Ar avy amin�ny Star
Fikambanana iray anisan�ny mijery akaiky izay hahafahana mampivoatra ny fiainan�ny ankizy, indrindra fa amin�ny lafiny ara-panatanjahantena ny Terres en m�l�es.
Zaza niharan�ny herisetra 126 ireo tonga nanatona ny kaominina tamin�ny 2016
Nihena amin�ny ankapobeny ny isan�ireo zaza niharan�ny herisetra tonga nanatona ny ivontoerana fandraisana an-tanana vonjimaika azy ireny tantanan�ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny taona 2016 lasa teo.
Faribolana SANDRATRA Hiverina indray ny antsan-tononkalo
Toy ny isaky ny sabotsy fahefatra amin�ny volana, hiverina indray ny antsan-tononkalo ifanaovan�ny Faribolan�ny Poeta sy ny Mpanoratra Sandratra fotoana amin�ireo mpankafy haisoratra ao amin�ny Goethe Zentrum/CGM, Analakely.
Tsy misy mihaino
Toy ny rano natondraka an-damosin�ny gana ny karazam-pananarana sy ny fampatsiahivana antsika ireo kolontsaina naha izy antsika ankehitriny raha mijery ny zava-miseho manerana ny nosy.
Ralaisoarinirina Alain Voahosotra ho mpamily mahay mitondra � citerne � indrindra
Ilana fahaizana sy traikefa manokana ny familiana ireny karazana kamiao mpitatitra solika ireny na ny camion citerne.